Sinocare oo leh Medlab Middle East 2020-News-Sinocare
Sinocare oo leh Medlab Middle East 2020
Waqtiga: 2020-02-11 Hits: 313
Changsha Sinocare Inc. waxay kaqeyb qaadatay MEDLAB Bariga Dhexe 2020 magaalada Dubai, intii u dhaxeysay 2/3/2020 ~ 2/6/2020.
MEDLAB waa shirkad caan ah oo si weyn looga soo qeyb galey bandhigyo sheybaar iyo baaritaano caalami ah iyo shirar caalami ah, kulankaan sheybaarka sanadlaha ah waxaa soo jiitay in ka badan 600 oo bandhig iyo in ka badan 25,000 kasoo qeyb galayaal oo ka kala yimid 129+ dal.
MEDLAB 2020, Sinocare waxay u keentaa labo hadiyado kale oo waaweyn bukaannadeenna qaba sonkorowga iyo cudurrada kale ee dabadheeraad ah ee adduunka oo dhan, laguna magacaabo AGEscan iyo iCARE-2000.
AGEscan waa astaamo sare oo soosaarista glication fluorescence detetor, iyada oo aan loo baahin waxna la iska indho tiraynin isla markaana rinjiga indhaha laga qaado, 6 ilbidhiqsi kadib ayaa heli kara natiijooyinka, saadaalinta halista cudurka sokorowga 5-10 sano ee soo socota. AGEscan waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay dadka aan cudurka lagaran ee cudurka macaanka qaba iyo kaadi macaanka ka hor si ay u sameeyaan baaritaanka hore, iyo kooxda caafimaad qabta si ay u qabtaan qiimeyntooda halista cudurka macaanka.
iCARE-2000 waa falanqeeye hawleed badan oo toos ah oo la qaadan karo. Mustaqbalka, bukaannada qaba xanuunnada fudud ayaa lagu dhiirrigelin doonaa inay booqdaan xarumaha caafimaadka ee heer bulsho si loo naaquso culayska badan ee cusbitaalada waaweyn. iPOCT waxay si tartiib tartiib ah uga dhici doontaa isbitaallada miyiga iyo xarumaha caafimaadka bulshada halkaas oo ay ku habboonaan lahayd inay buuxiso shuruudaha tijaabada mugga iyo la'aanta shaqaale xirfad leh.
“Annaga oo ku shaqeyna jacayl, waxaan kor ugu qaadaynaa tayada nolosha ee bukaannada qaba sonkorowga iyo cudurrada kale ee raaga.” Ayuu yidhi madaxweynahayaga, Mr. Li.
Sinocare waxay fureysaa albaab cusub oo ku saabsan maareynta sonkorowga oo dhan, iyadoo la siinayo alaabo tayo sare leh isla markaana adeegga ugufiican ay noo tahay aasaaskeenna asaasiga ah iyo kan joogtada ah.
Bogga Hore: SAA & CRP waxay khuseeyaan baaritaanka cusub ee Virus pneumonia (NCP)
Bogga Dambe: Sinocare ayaa ka soo qeybgashay Qalabka 'China (Hunan) Qalabka iyo Soo Saarida Soo Galeysa' Cambodia Investment Expo '